महिलाले भिखारीलाई सधैं सडक किनारमा लेखिरहेको देख्थिन्, एक दिन कागज खोलेर हेर्दा… - Kanchanjangha Online
महिलाले भिखारीलाई सधैं सडक किनारमा लेखिरहेको देख्थिन्, एक दिन कागज खोलेर हेर्दा…
कञ्चनजंघा अनलाईन ३० आश्विन २०७५, मंगलवार १०:४९ मा प्रकाशित ( ३ साल अघि) ८६३ पाठक संख्या
एजेन्सी। ब्राजिलको सडकमा भिख मागेर गुजारा गर्ने एक व्यक्ति अचानक स्टार बने । राइमुंडो अरुडो नामका ती व्यक्ति ३५ वर्षदेखि सडक किनारमा बसेर भिख माग्थे ।
नजिकैको एक घरमा बस्ने महिला सधैं उनको अगाडिबाट हिँड्थिन् । एक दिन महिलाले ख्यान गरिन् कि ती भिखारी सधैं केही न केही रद्दी कागजमा लेखिरहेका हुन्थे । एक दिन महिलाले सोधिन् कि उनी दिनहुँ के लेख्छन् । त्यसपछि भने ती भिखारीको जिन्दगी नै बदलियो ।
शाला मोन्टिएरो नामकी ती महिलाले उनले के गर्छन् भनेर सोध्दा राइमुण्डो केही बोलेनन् बरु एउटा कागज दिए । महिलले जब त्यसलाई त्यसपछि बल्ल थाहा भयो त्यो निकै आकर्षक कविता थियो । शालाले बुझिन् कि यी व्यक्ति वर्षौंदेखि सडक किनारा बसेर कविता लेख्थे । शाला लगातार कैयौं दिनसम्म उनलाई भेटिरहिन् । हरेक पटक ती भिखारी शालालाई नयाँ कविता लेखेर दिन्थे । यसबाट प्रभावित भएर शालाले एक कविता फेसबुकमा शेयर गरिन् । त्यो कविता निकै भाइरल भयो । मानिसहरुले पत्याउनै सकेनन् कि एक भिखारी यति राम्रो कविता लेख्न सक्छन् । शालाले कविता लेखिएको कागजको फोटो खिचेर त्यो पनि शेयर गरिन् ।
शालाले राइमुण्डोको नामबाट एउटा फेसबुक पेज बनाएर जो कविता शेयर गरेकी थिइन् तिनीहरु एकदमै लोकप्रिय भए । हेर्दाहेर्दै राइमुण्डोका फ्यान बढ्न थाले । अहिले राइमुण्डोको फेसबुकमा फलोअरको संख्या २ लाख पुग्न लागेको छ । राइमुण्डो चर्चित भएपछि मानिसहरु उनलाई भेट्न जान थाले । उनको फेसबुक पेज बनाउने महिलाले उनलाई नुहाइदिइन्, कपाल, दाह्री काटिदिइन् । उनको नयाँ रुप देखेर उनलाई चिन्न मुस्किल थियो तर नयाँ लुकको फोटो फेसबुकमा देखेर उनका भाइले उनलाई चिने । त्यसपछि थाहा भयो कि राइमुण्डो एक व्यापारी थिए जो सैनिक तानाशाही शासनका बेला परिवारबाट बिछोडिएका थिए । त्यसपछि पैसाको अभावमा उनको यो हाल भएको थियो ।
तनहुँमा सडक छेउमै रहेको अचम्मको घर ! के छ घर भित्र ? यस्तो छ बास्तविकता
४७ बर्ष उमेर अन्तरका भाइरल जोडि पहिलो डेटिङमा,भन्छन एकअर्का बिना बाच्न सक्दैनौ,अब छोरो जन्माउदै हेर्नुहोस भिडियो
नेपाल आइडलकी मेनुका पौडेलले आफ्नो बिहेबारे पहिलो पटक मुख खोलिन, हेर्नुहोस भिडियो
केटा मान्छे केटी बन्ने, केटीले केटाको छ भन्ने ! लिङ्ग परिवर्तन साचो हो त डाक्टर ? माता सबिता (भिडियो)
कुकुरको मुत्र सेवन गर्ने यी महिला !आखिर किन खान्छिन ?
यी जवान युवतीले ७० वर्षीय वृद्धसँग गरिन् विवाह ! कारण थाहा पाउनु भएमा चकित पर्नुहुनेछ !